Iran: Manohitra ny loza voajanahary ny bilaogera Maintso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2018 4:09 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Português, عربي, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, 日本語, English
(Marihina fa tamin'ny 2 Septambra 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Bilaogera mpiaro ny tontolo iainana sy mpikatroka marobe no nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana ny 27 Aogositra 2007, manohitra ny fahafatesan'ny vorona sama [flamingo] maherin'ny 2000 tany amin'ny Farihy Bakhtegan tany Iran. Manao fihetsiketsehana manohitra ny tsy firaharahan'ny governemanta sy ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana izy ireo. Nilaza ny tantaran'ity loza voajanahary ity ireo bilaogera mpiaro ny tontolo iainana Iraniana ary nanome torohay momba ny fihetsiketsehana.
Lazao ahy ny antony
Nanoratra bilaogy, Didban Mohitzist (mpanara-maso ny tontolo iainana) i Mojgan Jamshidi, bilaogera sady mpanao gazety. Nanasa ireo namana sy ireo olona rehetra izay miahy an'i Iran maitso izy mba handray anjara amin'ny fihetsiketsehana ary handà amin'ny fandeferana ny fanimbana ny harena voajanahary noho ny fanamboaran-dalana sy ny fananganana tohodrano. Nambarany ny lahatsoratra iray nilaza momba ny lalàm-panorenana Iraniana izay miantoka ny fiarovana ny tontolo iainana ary hoy izy hoe:
Tokony hanontany azy ireo isika – ireo manampahefana – amin'izay tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna andininy faha 45 sy 50 ao amin'ny lalàmpanorenana raha mihevitra izy ireo fa manao ny asany, kanefa manakana ny fandehanan'ny rano ho an'ireo biby an'arivony miaina any Bachtegan sy any amin'ireo farihin'i Urmieh, raha nitarika ny fahafatesan'ny vorona sama (flamingos) miisa 2000 tao anatin'ny fotoana fohy ny tetikasa momba ny fampandrosoana maharitra. Tokony hanontany ny vahoaka isika – ireo solombavambahoaka – izay ao amin'ny parlemanta Iraniana, raha toa izy ireo ka efa nanao fanadihadiana momba ny fahapotehan'ny harena voajanahary tao anatin'ny 30 taona farany.
Nanakiana ny tsy fanenjehan'ny manampahefana ao amin'ny fitsarana ireo olona izay manimba ny valan-javaboary sy loharano voajanahary ihany koa i Jamshidi .
Nilaza ny Greenblog fa maro ireo bilaogera sy mpiaro ny tontolo iainana no nisaona ny Alatsinainy 27 Aogositra mba hanoherana ny fahafatesan'ny vorona sama maherin'ny 2000. Nanolotra sary famantarana maromaro izy ireo izay azon'ny bilaogera navoaka ao amin'ny bilaogy ho firaisankina tamin'ny fihetsiketsehana. Nitondra ny sarin'ny sama ny sary famantarana rehetra ary nolazaina tao ihany koa ny daty sy ny toerana nanaovana ny fihetsiketsehana.
Namoaka sary roa tamin'ny fihetsiketsehana i Mountainwatch. Nilaza ilay bilaogera fa nihaona sy niresaka tamin'i Dlavar Najafi izy, lefitry ny lehiben'ny Sampan-draharahan'ny Tontolo Iainana. Nilaza i Najafi fa miahy ny tontolo iainana ny filoha Iraniana sy ny Mpitarika Faratampony . Nilaza ilay blaogera fa tsy fantany izany izay antony nahatonga izany fahasimbana rehetra izany raha toa ka nilaza ny manampahefana ambony fa miahy izany izy ireo.
Nihevitra ireo bilaogera Iraniana ivelan'i Iran fa zava-dehibe ity hetsika ity ary nanoratra momba izany ihany koa izy ireo. Manana rohin'ny sary maro ny The Spirit of Man ary nilaza hoe:
Nanao fihetsiketsehana manoloana ny Departemanta misahana ny tontolo iainana Iraniana ireo mpikambana ao amin'ny FTMF (ONG) mpiaro ny tontolo iainana ary naneho ny tsy fahafam-pony tamin'ny politikan'ny tontolo iainana ataon'ny governemanta. Tsy faly ny ankamaroan'izy ireo tamin'ny fanimbana ny ala, ny faritra an-tendrombohitra ary ny loharanon-karena voajanahary ao amin'ny firenena sy noho ny tsy fikarakarana izany araka ny tokony ho izy.